'कि त हामी भोकै हुने... :: अनुषा अधिकारी :: Setopati
अनुषा अधिकारी काठमाडाैं, फागुन २
आदर्श मिश्र (बायाँ) र विनोद देउवा (दायाँ)। प्रदर्शनक्रमको दृष्य (बीचमा)। तस्बिर सौजन्यः विनोद देउवा
दस दिनअघि त्रिचन्द्र कलेजमा अध्ययनरत विनोद देउवा सिंहदरबारको पश्चिम गेटबाहिर बसेर किताब पढिरहेका थिए।
अर्थशास्त्र, दोस्रो वर्षमा स्नातक गरिरहेका १९ वर्षीय विनोदलाई साहित्य र किताब पढ्नमा धेरै रूचि छ। त्यो दिन भने उनी नेपालको संविधान पढिरहेका थिए। सिंहदरबार अगाडि उनीसँग अरू साथी पनि थिए, उसैगरी किताब खोलेर बसेका।
उनीहरूले किताब खोलेर पढ्न थालेको दुई मिनेट मात्र भएको थियो होला, अचानक प्रहरीको हुल आएर समात्यो। जेल लग्यो। पछि उनीहरू मुक्त भए। त्यसपछि पनि विनोद र उनका साथी रोकिएका छैनन्। विभिन्न सार्वजनिक ठाउँमा त्यसैगरी किताब पढिरहेका छन्।
यी विद्यार्थीले किन यसो गरेका?
विदेशबाट आयात हुने किताबमा दस प्रतिशत कर लगाउने सरकारी नीतिविरूद्ध उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले किताबमा कर लगाएसँगै बजारमा पाठ्यक्रम सम्बन्धी र अंग्रेजी साहित्यका किताब बजारमा अभाव भएको भन्दै विद्यार्थीहरू दुई सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्।
प्रदर्शनक्रममा विद्यार्थीहरू माइतीघर मण्डल, सिंहदरबार निषेधित क्षेत्र र त्रिचन्द्र कलेज गेटबाट र्‍याली गरेका थिए। एक साताअघिदेखि उनीहरूले शान्त रूपमा किताब पढेर प्रदर्शन गर्न थाले। तै पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको विनोद बताउँछन्।
'हामी दस जना विद्यार्थी भएर सिंहदरबार पश्चिम गेटअगाडि चुपचाप पढ्न गएका थियौं,' प्रदर्शनमा संलग्न विनोदले भने, 'त्यस बेलासम्म प्रहरीले केही भनक पाएको थिएन। झोलाबाट ब्यानर निकालेपछि प्रहरी आएर सबैलाई लगे।'
'किताबमा कर लगाएको खबर पाउनेबितिक्कै आवेदनका लागि सय जना विद्यार्थीको हस्ताक्षर लिएर ज्ञापनपत्र बनायौं,' विनोदले भने, 'तर अर्थमन्त्रालय जाँदा कोही पनि हामीसँग बोल्न मान्दैनन्। पत्र पनि जबरजस्ती त्यहाँ राखेर आएका छौं।'
उनका अनुसार अर्थमन्त्रालयमा आफ्नो आवदेन सुनाउन उनीहरू लगातार पाँच दिन त्यहाँ धाए। दिनभरी बस्दा 'मन्त्री भेटाइदिने' कुरा गरेर अन्तमा कसैले वास्ता गरेन।
'केही सीप नलागेपछि सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन गरेका थियौं,' विरोधमा सक्रिय २० वर्षीय प्रथम प्रधान भन्छन्, 'त्यो आन्दोलन गर्न प्रतिबन्धित ठाउँ हो भन्ने थाहा छ, तर हामीसँग उपाय रहेन। शान्त रूपमा किताब पढेर बसेका थियौं।'
अर्कोपटक यसरी निषेधित ठाउँमा प्रदर्शन गरे राजद्रोह मुद्दा लगाएर विदेश जान नपाइने भनेर प्रहरीले 'थर्काएको' प्रथम बताउँछन्।
पक्राउ परेका विद्यार्थीलाई जेलमा चार घन्टा राखेर निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन नगर्ने सर्तमा छोडिएको थियो।
यसैक्रममा विनोदले प्रहरीलाई विद्यार्थीका कुरा सरकारसम्म पुर्‍याइदिन भनेका थिए। केही जवाफ नपाएपछि प्रदर्शन अझै निरन्तर गरिरहने उनले बताए।
'किताबमा कर लगाउनुपर्ने तर्क छ भने सरकारले हामीलाई बुझाउन सक्नुपर्‍यो नि,' विनोद भन्छन्, 'तर उहाँहरू कुरा गर्नै खोज्नुहुन्न। अर्थमन्त्रालय जाँदा 'तपाईंको पढ्ने काम हो, खुरुखुरु पढ्नुस् न' भनेर हामीलाई पन्छाइयो। हामीलाई सरकारसँग टेबल-टक गर्न पाउने मौका दिनुपर्छ।'
प्रथमले थपे, 'सुरूमा शान्त प्रदर्शन गरे हुन्छ जस्तो लागेको थियो। अर्थमन्त्रालयको बेवास्ता र हामीलाई जेल नै हालिसकेपछि अब आवाज उठाउन वा निषेधित क्षेत्रमा फेरि प्रदर्शन गर्न बाध्य भएका छौं।'
किताबमा कर र यसले बढाएको मूल्यविरूद्ध मात्र यो आन्दोलन नगरिएको प्रथमको भनाइ छ। जब प्रकाशन गृहले थोरै किताब भित्र्याउँछन्, थोरैले मात्र पढ्न पाउँछन् र तिनीहरूमा कम जागरुकता हुन्छ।
'धनीले त सजिलै पढ्न पाउँछन्, मध्यम वर्गीयले दुःख गरेर पढ्नुपर्छ र गरिबले कहिल्यै पढ्नै पाउँदैनन्,' यो विषयमा देखिने समस्या चित्रण गर्दै विनोदले भने, 'नेपालमा युवाबीच पठन संस्कृति भर्खरै बढिरहेको छ। यसरी कर बढायो भने पढ्ने वातावरण झन् कम हुन्छ। उपन्यास र कथा किन्न धेरै जरुरी नपर्ला, तर पाठ्यक्रमकै किताब किन्न नसक्दा विद्यार्थी कसरी पढ्ने? यो कुरा सरकारले बुझेको छैन।'
विनोद धनगढीबाट आएका हुन्। आफ्नो परिवारभन्दा टाढा काठमाडौंमा पढ्नै भनेर एक्लै बसेका छन्। उनलाई हरेकपटक किताब किन्दाको 'बिल' परिवारलाई बुझाउनु पर्छ। पछिल्लो समय आफ्नो खाजा खर्चबाट पैसा जोगाएर उपन्यास किन्दै आएको बताउँछन्।
'अब हामी कि भोकै हुने भयौं, वा किताब पढ्न नपाउने भयौं,' उनी भन्छन्।
ज्ञान आर्जन गर्न आफूले जगाएको किताब मोहमा सरकारी नीतिकै कारण अंकुश लाग्न थालेपछि विनोद पहिलोपटक आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। अब कर फिर्ता नभएसम्म उनले पछि नहट्ने अठोट गरेका छन्।
'आन्दोलनकै कारण किताब पढ्ने समय निकाल्न पाएको छैन,' भने, 'तर अहिले पछि सरे कहिल्यै पढ्न नपाइएला भन्ने चिन्ता छ।'
गत वर्ष पनि किताब करको विरोधमा अरू नै समूहले गरेका प्रदर्शनमा चुपचाप ब्यानर समातेर बस्ने गरेको विनोद बताउँछन्। अहिले भने यसविरूद्ध बोल्ने कोही नभेटेकाले आफैं अघि सरेर उनले बताए।
'हामीलाई किताबको कुरामा मात्र निराशा छैन। बोल्न नदिने, लेख्न नदिने र अब पढ्न पनि नदिने, यो गहन विषय भइसक्यो,' प्रदर्शनमा सहभागी एलनजंग थापा भन्छन्, 'दस प्रतिशत कर तिर्नुपर्दा धेरै ठूलो नसुनिएला। तर कोही गरिबलाई किताबमा थप सय रूपैयाँ तिर्न मुश्किल हुन्छ। त्यही सय रूपैयाँका कारण उसले पढ्ने अवसर गुमाउन सक्छ। मैले तिर्न सक्छु भन्दैमा यसविरूद्ध नबोल्ने भन्ने हुँदैन।'
एलनले थपे, 'सरकारले यो कुरा नसुनेको एक-दुई हप्ता मात्र भएको होइन। असारदेखि हो यसविरूद्ध आवाज उठेको, आजसम्म सुनेको छैन। अहिले विद्यार्थीहरू सक्रिय भएर हो अलि चर्को सुनिएको।'
विद्यार्थीहरूले आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। यही फागुन ७ गते यही विषयमा नारा लगाई प्रजातन्त्र दिवस मनाउने योजना बनाएका छन्। शुक्रबार उनीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरमा हस्ताक्षर संकलन अभियान गरिरहेका छन्।
'हामी सरकारको काम आलोचना गर्न चाहदैनौं,' विनोद भन्छन्, 'हाम्रो सोच सरकारलाई कमजोर देखाउने पनि होइन। तर यो आन्दोलन जति लम्बिन्छ, सरकार आफैं कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ।'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २, २०७६, १४:१७:००
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वप्रकाशको प्रश्न- भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ भन्नुहुन्छ, बाँस्कोटाका शब्द त सुन्नुभो नि?
कोरोनाभाइरसले थप दुई जापानीको मृत्यु
सुर्खेतको छिन्चु बजार दुई दिनदेखि तनावग्रस्त, पाँच घाइते
नुवाकोटमा बस खस्यो, आठ घाइते
महराको जस्तो नहोस् मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो काण्ड! अमित ढकाल